လူသားအားလုံးအတွက်: ၀ိုင်းစု သရုပ်ပျက်ပုံ
23 Mar 2011 တွင်ရန်ကုန်မြို့ ဆီဒိုးနားဟော်တယ် ( Sedona Hotel ) ပြုလုပ်ခဲ့သော ကာနီဘို ဆယ်နှစ်ပြည့် အခမ်းအနားတွင် ဖျော်ဖြေခဲ့သော အဆိုတော် ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်းရဲ့ နောက်ဆုံး ပေါ် ဖက်ရှင်နှင့် အခမ်းအနားဓါတ်ပုံများ
မြန်မာရုပ်ရှင်မင်းသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုတဲ့လားခင်ဗျာ ??????
အောက်ကလည်း ဘာစတော့ကင် ( stocking ) မှဝတ်ထားတဲ့ပုံမပေါ်ပါဘူး။
စင်မြင့်ပေါ်ကို ဒီလိုအဝတ်အစားမျိုးနဲ့တက်ဆိုရဲတာ ခေတ်မှီတာလား ????
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ ရှေးရိုးအစဉ်အလာ ဝတ်စားဆင်ယင်မှု အတိုင်းလိုက်နာရမယ်လို့တော့
ကျွန်တော်လည်း တဖက်သတ် မယူဆပါဘူးဗျာ။ ဒါပေမယ့် အခုလိုဝတ်စားဆင်ယင်တာတော့ တဆိတ်လွန်တယ်ထင်ပါတယ်။
www. Burma Today .net
Posted by မိုးယံ at 6:10 PM Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
ခုမှ သိတာလား၊ နောက်ကျထာ :P
ဝိုင်းစု ကျောက်သိမ်း said...
ဒို့က ကြည့်ပြီးတာကြာလို့ သွားရေ..ရော ..ဘာရော..အကုန် ယိုပြီးပေါ့...
အဲဒါ ၀ိုင်းစုငယ်ငယ်တုန်းက ၀တ်တဲ့အင်္ကျီ။ ၀ိုင်းစုကကြီး လာလို့ တိုသွားတာ.. :P
ဒီတစ်ခါ ဝိုင်းစုက စကပ်တိုတိုလေးမဝတ်တော့ဘူး....ဟိ
အဲဒီ ကာနဗို ပွဲရဲ့ လင့်မူရင်းနေရာလေးကို ပေးနိုင်မလား။
အဲဒီနေ့က စိုးမြတ်သူဇာဝတ်တဲ့ အင်္ကျီဒီဇိုင်းလေး လှတယ်ပြောလို့ ပုံကြည့်ချင်လို့..၊ အမ ရှာတာ ရှာမတွေ့လို့..။
မွမွ နတ်သာမီးရေ ဒီဟာလေးလား မသိ
အင်း သတိရသေးတယ် မင်းသမီးခင်သီတာထွန်းက ကလီယိုပါထရာဆိုတဲ့ အမ်တီဗီရိုက်တော့ ရုပ်ရှင်ရိုက်ခွင့် သုံးနှစ်ပိတ်ခံရတယ်...အခု ဒီမင်းသမီးလေးကို သတိထားမိနေတာကြာပြီ...ကြာလေ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ဖြစ်လာလေပဲ...အမျိုးကောင်းသားသမီးပုံတောင် မပေါက်တော့ဘူး...သူက စင်ပေါ်တက်ပြတာ ကြည့်တဲ့ပရိသတ်ကို ဘယ်အဆင့်ပို့လိုက်တယ် မသိဘူးလေ...ပရိသတ်ထဲက ယောက်ျားထုကြီးတစ်ရပ်လုံးသာမက ယောက်ျားအားလုံးကို တဏှာရူးတွေချည်းပဲ လို့ သတ်မှတ်ထားပုံရတယ်...ဒေါသထွက်လိုက်တာနော်...
၀ိုင်းစု လက်ကလေး မြှောက်လိုက်ရင် ဇာပါးပါးနဲ့ဂါဝန်လေးက ဟိဟိ... အဲ့ဒါနဲ့.. ဟိဟိ သွားရော..
ကတောက်... ငါ့မှာ ဒေါသထွက်လွန်းလို့ခဏခဏ ထပ်ကြည့်ပစ်လိုက်ရတယ်... :)
မြန်မာမင်းသမီးတွေ အရင်က နိုင်ငံခြား ရောက်ရင် မြင်မကောင်းအောင် ဝတ်ကြတယ်။ အခုတော့ ပြည်တွင်းမှတောင် ဝတ်လာကြပြီပေါ့။ တကယ်စိတ်ပျက်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။
နောက် ရေကူးဝတ်စုံနဲ့ စင်ပေါ်တက်မလားပဲ
စိတ်ကုန်တယ် .. ဂယ်ပဲ .. x-(
တောက်.... ရှေ့က ဂါဝန်က ကန့်လန့်ကန့်လန့် နဲ့ ..... တယ်လေ... ငါ စင်ပေါ်တက်ချွတ်လိုက်ရ... :P
ခက်တယ် ခက်တယ် ........ဘာကြောင့် ခေတ် ကို နောက်ပြန် ဆွဲ ချင်နေကြတာလဲ..
နိုင်ငံခြား မှာသာ ဆို အလုပ်ကို လုပ်ရမှာ မဟုတ်တော့ဘူး ဒါတွေ ကို လိုက်ပြောနေမယ် ဆိုရင် ကို့မြန်မာ နိုင်ငံ ကလည်း ကမ္ဘာ ပေါ်က နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ ဘဲလေ အဆင့်အတန်း မြင့်စေချင်ဘူးလား ..၀တ်ကြ အဓိက တွေ မပေါ်ရင် ပြီးတာပဲ.....